Development Network for Immigrants ─ ဖိန်လိကွန်ယက်【ဝေရှောက်ထိုင်ဝမ်ဟောင်ကြားကျိုက်】လှုပ်ရှားမှုစတင်! အမြန်လာ၍ သင့်ရဲ့လှပသောအပြုံးကို မျှဝေကြပါစို့!
Updated : 2019/10/17 下午 04:10:00
အပြုံးသည် နိုင်ငံသားမခွဲ၊ နယ်နမိတ်မရှိ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အလှဆုံးဘာသာစကားဖြစ်သည်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုကျင်းပဖို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤထိုင်ဝမ်မြေပေါ်တွင်နေထိုင်သည့်ထိုင်ဝမ်လူမျိုး ဒါမှမဟုတ် လက်ထပ်၍ထိုင်ဝမ်ရောက်လာသူ၊ ထိုင်ဝမ်လာ၍အလုပ်ကြိုးစားနေသည့် နိုင်ငံသား သစ်တို့ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေများနှင့်အတူ ရယ်မောလှပသောဓါတ်ပုံတွေကို ဝေမျှပြီးပျော်ရွှင်မှုကို ဖြန့်ဝေနိုင်သည်။ သင်ငါမခွဲပဲ လှပသောအပြုံးဖြင့် ထိုင်ဝမ်ကို ပြည့်နက်ပါစေ။
#လှုပ်ရှားမှုအချိန်：ယခုမှစ၍ 108ခုနှစ် 10လ 31ရက်ထိ။
#ပါဝင်ရန်ရည်ရွယ်သူ：နိုင်ငံသားသစ်နှင့်ပြည်သူတို့ ဓါတ်ပုံများအတူတကွလာရောက်၍ ဝမ်းမြောက်စွာ ဖြန့်ဝေနိုင်ပါစေ!
#လှုပ်ရှားမှုနည်းလမ်း：သင်နှင့်မိသားစုဝင်(သို့)မိတ်ဆွေအတူ ပြုံးရွှင်နေသည့်ဓါတ်ပုံ 2-3ပုံးခန့်နှင့် သင့်နာမည်ရင်း၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းကို E-mail：immigration0227@gmail.com သို့ပေးပို့လျှင် ကံစမ်းမဲပါဝင်နိုင်တယ်နော်! လက်ခံရရှိပါကအကြောင်းပြန်ပေးမယ်နော်!
#လက်ဆောင်ကောင်းဒီမှာကြည့်：လှုပ်ရှားမှုပြီးနောက် ကံကောင်းသည့်ကလေး10ဦးရွေးချယ်ပြီး ကျားလော့ဖူကူပွန် 200ယွမ်ရရှိမယ်နော်!!
1.လှုပ်ရှားမှုပြီးနောက်，ကျားလော့ဖူကူပွန် မဲနိုက်ပေးပြီးဆုရရှိသူများကို ဖိန်လိကွန်ယက်တွင် ကြေညာပေးမည်။
2.လှုပ်ရှားမှုပြီးနောက် ဓါတ်ပုံများကိုကျွမ်းကျင်သူများမှ နိုင်ငံသားသစ်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ သတင်း အချက်အလက် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဝေမျှမည်။ (ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမြှင့်တင်ရေး>လှုပ်ရှားမှု ရလဒ် > လှုပ်ရှားမှုရလဒ်)。
3.မေးမြန်းရန်ရှိပါက ဖုန်း(02)2388-9393လိုင်းခွဲ2364 သို့ဆက်ပါ။